LOVE ISLAND အတင်းအတိုင်ကော်လံ - MARVIN သည် MAURA ကိုအသုံးပြုနေသည် ?? DANNY က JOURDAN ရဲ့နာမည်တောင်မသိဘူး - သတင်း
Love Island အတင်းအတိုင်ကော်လံ - Marvin သည် Maura ကိုအသုံးပြုနေသည် ?? ထိုအ Danny ပင် Jourdan ရဲ့နာမကိုအမှီမသိရပါဘူး
ကြိုဆိုပါတယ် Tab ၏နေ့စဉ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်း 2019 သည်အတင်းအဖျင်းများဖြစ်သည် သင့်အားအသေးငယ်ဆုံးသောဒရာမာနှင့်ယနေ့ဝဘ်ဝန်းကျင်မှအနည်းဆုံးယုံကြည်ရသောသတင်းစာထုတ်ဝေသူများကိုယူဆောင်လာမည်။
စွန့်ပစ်ခံကျွန်းသားသုံး ဦး က Marvin သည် Maura ကိုအိမ်ထဲ၌နေရန်ပြောနေသည်
အသစ်စွန့်ပစ်လာသောကျွန်းများအဆိုအရလက်ရှိ Maura နှင့်အတူချိတ်ဆက်သူကို Marvin, ဂိမ်းကစားနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကမကျေနပ်စွာစွန့်ပစ်ခံခဲ့ရသောကျွန်းသူကျွန်းသားခြောက် ဦး အနက် ၃ ဦး သည်အသက် ၂၉ နှစ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးနည်းပြသည်သူမအားအမှန်တကယ်ဆွဲဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့်သူမနှင့်သူမနှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန်သူမနှင့်အက်ကွဲကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
FIVE မှာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်?
မျှဝေသည် Marvin Brooks (@marvinbrooks) ၂၀၁၁ ဇွန် ၇ ရက်၊ ည ၁၁ နာရီ ၄၈ မိနစ်တွင် PDT
ဒန်က 'သူလုပ်နိုင်တာမှန်သမျှလုပ်နေတယ်။ သူက Maura အပေါ်စစ်မှန်တဲ့မခံစားရဘူး သူမကဒါကိုသူသဘောပေါက်လိမ့်မလားဆိုတာဘယ်လိုခွဲထုတ်မလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
Maura နှင့်လည်းတိုးတက်မှုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည့် Dennon ကသူသည်သူမနှင့်အပြင်ဘက်တွင်ရှိလိမ့်မည်ဟုမသေချာကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Stevie ကမာဗင်ကို“ နည်းဗျူဟာတစ်ဝက်လောက်ပြောင်းလဲသွားပြီ” ဟုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီဟာကသူ့ကို ၀ င်ခွင့်ရစေမယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ သူဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာသေချာတယ်။
ဂျော့ခ်ျက Dennon Lucie သည်သူ၏ပုံမှန်အမျိုးအစားမဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်
လုံးဝမရှုပ်ထွေးသည့် Dennon သည်စုံတွဲအသစ်ဂျော့ခ်ျနှင့်လူစီအတွက်အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာလက်ဖက်ရည်ဖိတ်ခဲ့သည်။ ယခင်လူစီကသူ့ကို `ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ် 'ဟုပြောခဲ့သည်ဟုထုတ်ဖော်ခဲ့သည်
Arabella သည်သူ့ကို Jumpdan နှင့်စတင်ခွဲခြားလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ယခုဒန်နီအားတရားဝင် 'စွန့်ပစ်' ခဲ့သည်
သူက Della ကို villa မှစွန့်ပစ်ပြီးနောက်စောင့်ဆိုင်းလိမ့်မည်ဟုယခင်ကပြောကြားခဲ့သော်လည်း Arabella ကမူ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အရ The Sun အွန်လိုင်း 'ဒန်နီအတွက်အာဗယ်လာရဲ့ခံစားချက်တွေကတကယ့်ကိုအမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့်သူကသူ့အရောင်တွေကိုအခုပြနေပြီလို့သူမထင်တယ်'
ဤကဲ့သို့သောပြဇာတ်ကဲ့သို့သောအဝေးမှလမ်းလျှောက်ခြင်း ‍♀️ ယနေ့ညပြန်လည်ချိတ်ဆက်မည့်အချိန်တွင်မည်သူသည်မည်သူကိုသင်ထင်မြင်မည်နည်း။ ?? ‍♀️ မှတ်ချက်ပေးရန် #loveisland # loveisland2019
မျှဝေသည် Arabella Chi 11:01 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 2, 2019 ရက်တွင် (@arabellachi)
ဒါပေမယ့်သူမလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူမတစ် ဦး ခွက်ကဲ့သို့ကြည့်ဖို့လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဒါ Danny နှင့်အတူအမှုအရာကောင်းစွာနှင့်အမှန်တကယ်ကျော်ဖြစ်ကြောင်းပြောတရားမျှတပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စီးရီးမှ Josh နှင့် Wes အဆိုပါပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာမိမိတို့ခေါင်းပေါ်ချွတ်ရယ်မောခဲ့ကြသည်
ဂျော်ဂျီယာသံမဏိကိုယ်ထည်ဖောက်လုပ်ပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင်ဂျော့ရှ်သည်သူ၏တုန့်ပြန်မှုကို Casa Amor အဆုံးတွင်သူ၏ Instagram ဇာတ်လမ်းသို့တင်ခဲ့သည်။ ပြပွဲအတွင်းသူနှင့် Curtis တို့သည် Jourdan နှင့်လက်တွဲရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုသူမနှင့် 'Plymouth League' ဟုခေါ်ပြီး 'Plymouth' ကိုရယ်ခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ Curtis ရဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့တေးသံသံကိုကြားရတဲ့အချိန်မှာ Josh ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်က 'ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်။ သူကဖူးတဲ့ finesse နိုင်ဘူး။ လမ်းများပေါ်၌ထိုအမှုကိုပြုလော့။
ပြပွဲပြီးနောက်, Josh FaceTimed သူချင်းမတ်ေတာသကျွန်း 2018 alumnus, Wes ။ သူကပြောကြားခဲ့သည်မှာ '' Wes၊ တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်၊ တစ်နှစ်လုံးလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်း - နိုင်ငံကငါတို့ရဲ့အမူအကျင့်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့နဲ့မိုက်ကယ်ကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းပြန်ထားစေဖို့ပဲ '' ဟုသူပြောခဲ့သည်။
ဗက်စ်က“ ကျနော်တို့စတုရန်း ၁ ကိုပြန်လာကြပြီ။
Love Island USA သည်အရာဖြစ်မည်၊
ဒီပြပွဲကို Vine ကြယ်ပွင့်ဟောင်း Arielle Vanderburg ကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကရှိ CBS တွင်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယူကေတွင်မည်ကဲ့သို့ကြည့်ရမည်ကိုမည်သည့်စကားလုံးမှမရှိသော်လည်းသင်သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ခုရနိုင်သည် ဒီမှာ ။
Danny သည် Jourdan ကို 'Jourdanna' ဟုပြီးခဲ့သည့်ညကခေါ်ခဲ့သည်
Danny သည် Curtis နှင့် Jordan ကိုလွန်ခဲ့သောညက Jourdan နှင့်လက်တွဲကာနိုင်ဂျီးရီးယားတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာရန်တတိယအကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သည်။
သို့သော်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နေစဉ်အတွင်းပရိသတ်အနည်းငယ်ကဒန်နီအား Jourdan ၏နာမည်ကိုမှားယွင်းစွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးသူမကို 'Jourdanna' ဟုခေါ်ခဲ့သည်။
Danny က Jourdan ကို 'Jourdanna' လို့ပဲခေါ်တာလား။ Lmao ဆက်သွယ်မှုလူကလေးအဘို့ဤမျှလောက် #loveisland
- meg ♡ (@megsgriffith) ဇူလိုင်လ 2, 2019
ဂျန်နာနာသည် pshhhh ဒန်နီ ???? #loveisland
- စာအုပ်? (@ oliviuhh2) ဇူလိုင်လ 2, 2019
jourdan jordanna i- လို့ခေါ်တယ်ဒန်နီ #loveisland pic.twitter.com/Dw1CS0bkhN
-? (@al_i_ka) ဇူလိုင်လ 2, 2019
သူက Jourdan နဲ့ Joanna ကြားမှာရှုပ်ထွေးသွားလို့ရမလား။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ပရိသတ်အသစ်၏ဆက်သွယ်မှု၏တရားဝင်မှုကိုမေးခွန်းထုတ်ရန်ပရိသတ်များအားမတားဆီးနိုင်ပါ။
Holly Willoughby က Anna အားမိုက်ကယ်နှင့်ငြင်းခုံရန်သူတော်စင်ဟုခေါ်ခဲ့သည်
တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုလမ်းခွဲရန် Holly Willoughby သည်သူမအားသူမ၏ဆင့် ၂ ဆင့်ကိုပေးရသည်။ ဒီမနက်မှာ Kem နဲ့စကားပြောတော့သူမက 'အန်နာမှာရပ်တည်နိုင်တဲ့ခြေထောက်မရှိဘူးလား' လို့ပြောတယ်။
ဒါဟာ Amber, Michael နှင့် Amy တို့၏လူမှုရေးကို ဦး ဆောင်နေသောသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုသည်တစ်ခုတည်းသော fuck ကိုမပေးတော့ပါ။ မိုက်ကယ်၏အကောင့်ကိုကိုင်တွယ်သူမည်သူမဆို Amber ကိုစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ခြင်းသည် 'ပေါင် ၅၀ ကိုပစ်ချခြင်း' နှင့်တူညီသည်။
£ 50k ကိုလွှင့်ပစ်သည်: #loveisland pic.twitter.com/jgzIYfZbWT
- Michael GRIFFITHS (@Mac_Griffs) ဇူလိုင်လ 1, 2019
Amy ၏အကောင့်က 'oh Amy' တွစ်တာမှာခေတ်ရေစီးကြောင်း :
အိုးမေီလား #loveisland pic.twitter.com/70WkIP4Im8
- အေမီဟတ် (@ amyhart1707) ဇူလိုင်လ 2, 2019
အကောင့်ကိုဖွင့်လှစ်ထားသူတွေက Curtis ရဲ့ Jourdan နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားမှုကိုမကျေနပ်ကြပါ။ 'မင်းကဘယ်သူ့ကိုမှဒုတိယရွေးစရာမလိုဘူး' လို့ရေးပြီး 'Amy ကပိုထိုက်တန်ပါတယ်' ဟူသောသတင်းကိုပြန်ရေးသည်။
မင်း ?? လား ?? မဟုတ်ဘူး ?? ONES ?? ဒုတိယ ?? ရွေးချယ်ပါ #loveisland
၃၆၅ ရက်၊ ရုပ်ရှင်ထဲတွင်လော်ရာမှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်
Amber ၏သူငယ်ချင်းများသည် Michael ၌ IN ကိုရောက်သွားသည်
ဆုသည်မကြာသေးမီကလုံးဝတုန်ခါနေသောတွစ်တာများကိုလွှင့်ပစ်ခဲ့သည့် Team Amber ကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကမိုက်ကယ်၏ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် 'မီးလောင်နေတဲ့အဆောက်အအုံကနေငါ့ကိုကယ်ဖို့အတွက်မီးသတ်သမားမိုက်ကယ်ကိုမယုံဘူး။
'' ငါအရမ်းနုပျိုတယ်၊ အဲဒီမှာငါ့ကိုထားခဲ့ပါ၊
ငါ့ကိုမီးလောင်နေတဲ့အဆောက်အ ဦး ကနေကယ်ဖို့မီးသတ်သမားမိုက်ကယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ဝက်စိတ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်၊ ငါအရမ်းငယ်လွန်းတယ်၊ #loveisland pic.twitter.com/Yyz3j9Eapt
- Amber Rose Office (@AmberRoseGill) ဇူလိုင်လ 2, 2019
သူတို့က 'Amber ရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရတာကျွန်တော့်အတွက်ခက်ခဲခဲ့တယ်။
သင်၏မိတ်ဆွေအားနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရခြင်းနှင့်သူတို့၏လျှာကိုကိုက်ခြင်းသည်ဘာကိုပြောရမည်ကိုမသိသောကြောင့်မသင့်တော်ပါ။ ဒါပေမယ့်မနက်ဖြန် Amber နဲ့ Anna ကသူ့ကိုတွင်းတူးအသစ်တစ်ခုကိုပုတ်လိုက်သလိုပဲ။ အတော်လေး။
အမ်ဘာ၏သူငယ်ချင်းတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်စောင့်ကြည့်ရန်ခဲယဉ်းခဲ့သည်။ သင်၏မိတ်ဆွေကိုနာကျင်စွာတွေ့မြင်ရခြင်းနှင့်သူတို့၏လျှာကိုကိုက်ခြင်းသည်အဘယ်သို့ပြောရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မနက်ဖြန် Amber နဲ့ Anna ကသူ့ကိုတွင်းတူးအသစ်တစ်ခုကိုပုတ်လိုက်တာနဲ့တူပါတယ်။ #LoveIsland pic.twitter.com/XLa3U8kooL
Curtis နှင့် Amy တို့၏မိဘများကအဆိုပါပြဇာတ်ကြောင့်ဝမ်းနည်းကြေကွဲရသည်
ဒီမနက်ခင်းမှာစကားပြောတဲ့အမေရဲ့မိခင်က 'သူမချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့တစ်နေ့ကျရင်ကွဲသွားတယ်' ဟုပြောခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်း Curtis ၏မိခင်မျက်ရည်ကျခဲ့သည် Curtis ၏အစ်ကို၏ Instagram ပုံပြင် - သူမကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းအတွက်လူတိုင်းဝမ်းနည်းသောကြောင့်မဟုတ်ပေမယ့် Amy သူမသူ့ကိုလွဲချော်ကပြောသည်ဘယ်လောက်ကြောင့်။ ဒေီကသူတို့ဟာ 'ပျော်ရွှင်တဲ့မျက်ရည်' တွေလို့ပြောခဲ့တယ်။
စုစုပေါင်းကျွန်းသူကျွန်းသား (၆) ဦး သည်နောက်ဆုံးပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် villa မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ သူတို့ထဲက Stevie နဲ့ Dennon တို့ပါ ၀ င်ပါတယ်။ ဒန်၊ လာဗေးနာ၊ နဘီလာနှင့်မာရီယာတို့ကိုသင်ရိုးသားစွာမှတ်မိပါသလော။
ဒန်ပင်စကားပြောဆိုမှုအတွက် feature မပြုခဲ့ ????? Wtf ???? ထုတ်လုပ်သူတွေကသူ့ကိုညစ်ပတ်စေတယ်။ #LoveIsland
- အဲလာဝိုက် (@ ellawyse98) ဇူလိုင်လ 2, 2019
Nabila နဲ့ Lavena တို့ဒီအိမ်ကိုမ ၀ င်ခင်မ ၀ င်သင့်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမနက်ဖြန်အိမ်ပြန်တော့မယ်။ #LoveIsland pic.twitter.com/I8S17tRFTe
- James (@ jam3s1010) ဇူလိုင်လ 1, 2019
Lavena ဘယ်မှာလဲ။ Mrs သည်သင်၏လူသား၏အောင်မြင်မှုနှုန်းကို ၀% ဖြင့်ခိုးယူသည်။ ငါတို့မြင်တာကိုကြိုက်တယ်။ #LoveIsland
- sess✨ (@sessen__) ဇူလိုင်လ 1, 2019
Lavena, nabila နှင့် maria ဘယ်မှာလဲ သူတို့ကတောင်မှနေဆဲလား? #loveisland
- ခရစ်စတီဂျလီပက်တာ (@kjalipot) ဇူလိုင်လ 2, 2019
အဲလ်မာသည်သူမအသက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်းသူကျွန်းသားများအပေါ်သာမဟုတ်ဘဲထုတ်လုပ်သူများကိုသာလိမ်ခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအကြီးမားဆုံးအငွေ့အသက်များမှာ Elma ဖြစ်ပြီးအသက် ၂၆ နှစ်မဟုတ်ဘဲအသက် ၂၃ နှစ်သာရှိသေးသည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
Maura သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Love ကျွန်းကိုငြင်းပယ်ခဲ့သော်လည်းထုတ်လုပ်သူများကသူမကိုယခုနှစ်တွင်လက်မှတ်ထိုးရန် 'တောင်းပန်' သည်
Maura ၏စေ့စပ်ထားသူဟောင်း James Finnegan ကသူမကိုသူမအားနှင်ထုတ်ခဲ့သည် အိုငျးရစျနေ သူမသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြသနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းပယ်ချကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ည #CasaAmore မှမိန်းကလေးများပြန်လာသလား။ & @carolineflack က၎င်းသည်အများဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည် အချစ်ကျွန်း၏5နှစ်ကျော်အစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပြသ! ? ငါတို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြလား #LoveIsland #TeamMaura
မျှဝေသည် Maura Higgins (@maurahiggins) ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ည ၁၁း၀၀ အချိန်ညအချိန်တွင် PDT တွင်
သူက '' မနှစ်ကသူမပွဲကိုသွားဖို့ပြောတယ်။ သူမဘာကြောင့်ငြင်းတာလဲမသိဘူး သူမသည်အမြဲတမ်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားမိတယ်။ ''
မိုက်ကယ်၏သစ္စာဖောက်မှုကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မှ စ၍ Amber ကဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။
မိန်းကလေးများ Casa Amor တွင်ရှိနေစဉ်လူတိုင်းမိုက်ကယ်၏လှည့်ပတ်မှုကိုခေါင်းခါရန်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သော်လည်းအဝေးမှခေါ်ခဲ့သူမှာ Amber ဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးနေ့က Amber ကသူမကိုမိုက်ကယ်ကိုသတိထားမိပြီးသူမက 'မင်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့မင်းဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘ ၀ ကိုဖျက်ဆီးတော့မယ့်ပုံပဲ' ဟုပြောခဲ့သည်။
ကျွန်းသူကျွန်းသားဟောင်းများအားလုံးသည်ယခုအခါ Skinny Sauce အတွက်ဝမ်းနည်းဖွယ် #sponcon ကိုပြုလုပ်နေကြသည်။
Villa Post မုန့်အတွက်အငြင်းပွားမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည် Callum နှင့် Sherif တို့သည် 'Skinny Sauce' အတွက်ကမကထပြုထားသောပို့စ်များကိုတင်ရန်အလုပ်များနေသည်။
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအချို့သည် @skinnyfoodco ကိုယခုအချိန်အထိအမှာစာရောင်းနေကြသည်။ ငါတီးဝိုင်းလှည်းပေါ်ခုန်နေပါတယ်နှင့်ငါ့အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိ, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယောက်ျားတွေ။ @skinnyfoodco မှဒီဝက်အူချောင်းတွေအားလုံးမှာအပြစ်ရှိတယ်၊ သူတို့မှာကယ်လိုရီ ၀ င်လာတယ်၊ အဆီ ၀ င်လာတယ်၊ သူတို့ကိုသေချာစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ #notguilty #skinnyfoodco #guiltfree #ad
မျှဝေသည် SHERIF (@sherif_lanre) ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၊
ဘေးဖယ်အဖြစ်, Elma ကားတစ်စီးလေထုသန့်ရှင်းရေးနှင့်အတူရှိုးဖို့တတိယစွန့်ပစ်ကျွန်းကျွန်းဖြစ်လာသည်:
@carfumeuk မှဤအမွှေးနံ့သာများကိုငါ့လက်ဖြင့်ရပြီ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူတို့ကတော်တော်လှတယ်၊ ငါသူတို့အမျိုးသားတွေရဲ့ရနံ့လုပ်ပေး, ငါ Alien & Flowerbomb ဘို့သွား! ELMA10 ကိုလျှော့စျေးလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ #carfume #carfumeuk #ad ✨? ✨? ✨? ✨
မျှဝေသည် Apple Market (@elmapazar) ၂၀၁၁ ဇူလိုင် ၁ ရက်၊ ည ၁၁း၁၃ နာရီတွင် PDT တွင်
သူတို့ဟာ 'အရမ်းလှတယ်၊ အလို။
Nadia Essex က 'လူတွေကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိတဲ့ကျွန်း' ကိုဖွင့်ချင်တယ်။
Celebs Go Dating အဖွဲ့၏အကြီးအကဲ Nadia Essex ကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအမှန်တကယ်လိုချင်သူများအတွက်ရည်ရွယ်သည့် Love Island စတိုင်ပြပွဲတွင်သူမအနေဖြင့်စိတ်ကူးအကြံဥာဏ်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
စကားပြော The Daily Star သူမက 'ပုံမှန်အလုပ်တွေရှိတဲ့သာမန်လူတွေပဲရှိတယ်။ လွှမ်းမိုးမှုမရှိဘူး၊ မော်ဒယ်လ်တွေမရှိဘူး။ မင်းမှာဆိုရှယ်မီဒီယာနောက်လိုက် ၅၀,၀၀၀ ကျော်ရှိရင်မင်းကိုလျှောက်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။
'ငါကနောက်စောင့်ရှောက်မှုအပါအ ၀ င်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုရိုက်ကူးချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ကြည့်ရှုသူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်။ ငါစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေအခုအချိန်မှာငါလုပ်နေပြီ။ '
Elma နဲ့ Callum တို့ရဲ့ရက်စွဲက PR stunt လား။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Elma နှင့် Callum တို့သည်လန်ဒန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့သွားခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ဒါဇင်ခန့်တွင်လည်းတွေ့ရသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာစားသောက်ဆိုင်နာမည်ကိုအသေးစိတ်မပြောသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးတွင်စောစောစီးစီးဖော်ပြထားသည်။
Love Island မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် Elma Pazar နှင့် Callum MacLeod တို့သည်နေ့လည်စာစားချိန်တွင်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားသည် https://t.co/HmU20R9wgO pic.twitter.com/dQ2jIl8mCg
- SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) ဇွန်လ 29, 2019
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်စားသောက်ဆိုင်ကိုယ်စားဒီဖြစ်စဉ်သည်အနည်းငယ်သာ PR ဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကော်လံထဲသို့အမည်နှင့်အချို့ link များကိုထည့်နိုင်သလားဟုအီးမေးလ်တစ်ခုရခဲ့သည်။
သင်၏သွေးပြန်ကြောထဲသို့ထိုးသွင်းရန်ပိုမိုအရသာရှိသော trashy ပုံပြင်များ -
• Casa Amor နှင့်ပတ်သက်သည့်ဤရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု ၅၃ ခုသည်သင်၏ခေါင်းကိုအသေအချာလှည့်ပေးလိမ့်မည်
• ဤရွေ့ကား Love Island 2019 ၏သွန်းထံမှ WILDEST အသွင်ပြောင်းများဖြစ်ကြသည်
•ဤကျွန်းသည်သူတို့၏လျှို့ဝှက်ချက်အားလပ်ရက်နေ့၌ Love Island သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်